Itoobiya oo lagu eedeeyay xayiraadda Internet-ka - BBC Somali
Itoobiya oo lagu eedeeyay xayiraadda Internet-ka
Image caption Dibadbaxayaasha
Warbixin cusub oo ay soo saartay hay'adda xuquuqul insaanka ee Amnesty International, ayaa ku eedeyneysa dowladda Itoobiya in ay si sharci darra ah u xanibtay Internet-ka iyo baraha bulshada ayaga oo isku dayaya in ay soo afjaraan dibadbax ka dhan ahaa dowladda oo socday in kabadan hal sano.
Internetka ayaa si aad ah looga xadiday dalkaasi tan iyo markii ay dibadbaxyada bilowdeen bishii November.
Dowladda ayaa ku dhawaaqday xaalad deg-deg ah bishii Oktoobar, ayaga oo ku eedeeyay dadka baraha bulshada wax ku qora ee qurba joogta ah iyo warbaahinta in ay sii huriyeen dibadbaxyada, taa oo sababtay dhimashada shan boqol oo qof.
Warbixintu waxa ay sheegeysaa in intii u dhaxeysay bilihii June iyo Oktoobar ee sanadkan 2016-ka, la xannibay baraha xiriirka bulshada ee sida WhatsApp, Facebook iyo ugu yaraan 16 ka mid ah bogagga dhanka intarneedka ah.
Adeegga intarneedka ee taleefoonada gacanta oo ay xayiraad saarnayd tan iyo bishii Oktoobar ayaa hadda xayiraaddii laga qaaday balse wali ma sahlana in la isticmaalo baraha xiriirka bulshada.
Warbixinta ayaa waxa ay sheegaysaa in xayiraadda la xayiray intarneedka looga gol-leeyahay in aan la soo tabinin wararka la xiriira weerarada ciidamada ammaanka ay ku qaadayeen dadka dibad-baxyada dhigayay, xillii ay dalkaasi ka jireen mowjadaha dibadbaxyada ah bishii November ee sanadkii 2015-kii ka soo billowday gobolka Oromada, ka hor inta aysan ku baahin gobolka Amxaarada.
Waa labada gobol ee ugu weyn dalkaasi itoobiya.
Amnesty international ayaa sheegtay in dowladdu ay sidoo kale aad isha ugu haysay oo ay kormeereysay dadka isticmaalaya intarneedka.
Basle dowladda ayaa ku gacan seyrtay warbixintaasi, waxa ayna sheegtay in waajibaad uu ka saaran yahay in shacabkeeda ay ka badbaadiso in dhibaato laga dhex abuuro.
Warbixin dhawaan ay soo saartay hay'ad lagu magacaabo Brookings Institution oo fadhigeedu yahay dalka Mareykanka ayaa waxaa lagu sheegay in dowladda Itoobiya ay luminayso malaayiin doolar, sababo la xiriira xayiraadeeda ka dhanka ah intarneedka oo guud ahaan saameeyay ganacsiga dalkaasi.
Ugu yaraan 11 kun oo qof oo ay ku jiraan weriyeyaal, shakhsiyaadka faalooyinka ku qora baraha intarneedka iyo siyaasiin caan ah ayaa xabsiga la dhigay tan iyo markii dalkaasi itoobiya looga dhawaaqay xaaladda deg degga ah.